U Gabara Deegaan Dhan | Qeybta 17aad.... W/Q: Burhaan Burhaan - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > U Gabara Deegaan Dhan | Qeybta 17aad…. W/Q: Burhaan Burhaan
April 27, 2018 admin378
Waa habeenka sanadka cusub ee 2001. Magaalada Muqdisho caawa oo kale aad bay uga duwantahay habeenada kale. Waa habeenka kaliya ay magaaladu u egtahay magaalo nabad ah.
Yulqanka dadweynaha, iyo guuxa gawaarida baa jid kasta is haysta. Dadku ma ciidayaan sida Ree Galbeedka, banaanada inta isugu soo baxaanna sekemada sannadka ugu danbeeya ma isla tirinayaan, laakiin sanadka cusub inta uu dhalanayo waa soo jeedayaan. Habeenkaan oo kale waayi meysid qof weyn oo ku kaftamaya hadallo ay ka mid yihiin “socodkii aan sanadkii hore soo bilaabay baan hadeer halkaan ku imid!” iyo “meeshaan sannadkii hore fadhiistay baan weli fadhiyaa!”.
Labada hoteel ee ugu waa weyn magaalada uguna caansan, Shaamoow iyo Saxafi waxaa ka jira laba xafladood oo ay qabanayaan fanaaniinta ugu waa weyn magaalada. Dhalinyarada intooda hoteeladaas ag degan, iyo kuwa ay dhaleen waalidiinta reer magaalka isku haysta baa bandhigyadaas oo kale aad u camira.
Waxaa soo wehliya dhalinyaro dhuumasho ku yimaada, oo waalidkood aysan u ogolayn xafladaha nuucaas ah. Waalidka nuucaan ah heesahana caruurtooda waa ka ilaaliyaan, oo waxay aaminsanyihiin in iyaga loo cadaabi doono haddii caruur ay dhaleen oo iyagu aduunka ay keeneen uu heesa dhagaysi bilaabo. Waalidkaas intooda badan gawaaridooda waxaa laga helaa cajaladihii u danbeeyay oo ay fanaaniintii hore dibadaha kusoo saaraan.
Iskuulada magaalada Muqdisho in fara ku tiris ah maahane inta kale waxaa maal galiya, oo shaqaalahooda mushaarka siiya, dowladaha Khaliijka. Afka Carabiga baa maadooyinka iskuuladaas xoogooda lagu dhigtaa. Macalimiinta ka shaqaysana intooda badan waa wadaado fanaaniinta iyo dadka dhagaystaba u yaqaanna shayaadiin in la garaaco mudan.
Subaxa kowda bisha Janaayo iskuuladaas maamulayaashoodu ardadii xalay bandhigyada ka qeyb galay bay inta saf galiyaan gacmaha iyo dhabarka jeedal kala dhacaan, iyagoo hadba fanaan ay magaciisoo sadexan xifdisanyihiin lacnadaya oo maxaa loo soo fiirsaday ku celcelinaya.
Xafladda caawa aadka u shidan, uguna hadal haynta badan waxaa Shaamoow ka tumaya haraagii Hobolada Waaberi, iyo fanaaniin dagaaladii kusoo hanaqaaday oo iyagu jeebkooda Waaberi isugu daray.
Xaliima Khaliif Magool baa caawa markii ugu horeysay muddo dhowr sano ah si toos ah u heeseysa. Magaalada Muqdisho inta heesaha xiiseysana waxay u tahay fursad ay kusoo daawadaan fanaanad weyn ooysan beri samaadkii u helin fursad ay toos ugu daawadaan.
Xafladdu waxay ka dhacaysaa deydka hoteelka, oo kuraastii lagu camiray, inta gadaal taalla maahane, intii kale laga aruuriyay kadib markii dadku aadna u bateen, heesaha inta ay socdaanna fadhigii inta diideen iyagoo taagan is luxayaan.
Dadka intooda badan Magool bay u yimaadeen, laakiin markii ay heesayso waxaa ka bulxan badan marka ay fanaaniinta yar yare cusub heesayaan. Kuwaas waxaad moodaa dhalinyaradu in ay iyaga heesahooda aad u yaqaanaan.
Qof kasta wuxuu is leeyahay xilli fiican markaad qaadanaysid waqtigu waa ka dhaqso badan yahay mararka kale, sababtoo ah saacaddii laba iyo tobankii bay isku taagtay, kowdana waa in hoteelka la faarujiyaa. Dadka inta markii hoteelka laga soo wada baxo, saxmadda nacaysa durbaba waxay bilaabeen in ay iska sii baxaan.
Banaanka hoteelka dhanka laamiga Buulo Xuubeey xiga, waxaa taagan Muraayo oo gaari sugaysa. Caawa sida ay u labisantahay quruxdeeda cid garan karta ma jirto. Muraayo qurux waa u dhalatay laakiin fursad iyo qarash ay isku qurxiso inta badan ma hesho. Caawoo kale iyo marka ay aroos aysan ka baaqan karin u socoto, dhowr shay ooy ilaashato, dhar qiimo lehna ay kaligood ka leedahay bay hul ay ku qarsato kala soo baxdaa.
Intii gaarigii ay sugaysay baa dad badani baxeen, oo iyada iyo dhowr qofood oo kale maahane wax hoteelka banaankiisa ku hakanayay lama arag.
Wiil baa meel u dhaxaysa hoteelka albaabkiisa iyo halka ay Muraayo taagantahay liqdaaran. Wiilku wuxuu u egyahay qof wax sugaya, laakiin dadku inta ay hadba hoteelka kasoo baxayaan oo gawaaridooda fuulayaan, isagu halkiisa buu iska likaysanyahay.
Waa kowdii oo toban la’. Muusigii waa joogsaday, dadkiina inta hoteelka ka shaqaynaysa oo gudaha ka shanqaraysa iyo inta banaanka gawaarida ku sugaysa maahane intii kale waa baxeen. Muraayo markii ay aragtay in ay sii cidlooneyso gaarigiina uu kusoo daahay bay dhankii laamiga kasoo sikatay oo wiilku halkii uu taagnaa usoo dhawaatay si ay u weheshato.
Kowdii iyo shan daqiiqo buu gaarigii Muraayo u yimid iyadoo markaan cabsi billawday, kuna siganaysa in ay caawa hoteelka qol ay seexato ka deynsato.
Darawalka gaariga Muraayo canaanteeda iyo maxaad usoo daahdaydeeda dhag uma dhigine, markii ay fuushay buu aayar iska dhaqaajiyay. Muraayo baase u sheegtay in aysan baxayn iyadoon wiilka miskiinkaa ee jidka ku cagaartay aanan la qaadin.
“Wiilku gaari la’aan baan ahay miyuu ku yiri?” buu darawalkii weydiiyay.
“Maya, islamaba hadlin” bay ku jawaabtay.
“Ee see ku ogaatay in uu gaari weysanyahay?”
“Hadduu gaari haysto muxuu caawoo dhan hoteelka u hortaaganyahay? Muusigii oo socda buu caawa fiidkii soo baxay, welina waa kaas meesha suran” bay Muraayo darawalkii inta u sheegtay, gaarigii ka dagtay oo wiilkii dhankiisii u dhaqaaqday iyadoo kaba dhaadheer ood moodo in ay dhiiqo ka ilaalinayso ku tukubaysa.
“Aboowe raali noqo, waxaan ku weydiiyay ma isku filantahay mise waan kusii qaadnaa?” bey weydiisay.
“Wallaahi ma aqaan. Nin baa hoteelka i keenay, xilligii aan ku ballanay in uu iisoo laabtana wax badan buu kasoo daahay”.
“Intaan ka badan sooma socdee, na keen aan ku qaadnee”
“Abaayooy armuu hadde markaan idin raaco yimaadaa?” buu wiilkii yiri,
waase ka diiday Muraayo, oo soo kaxaysay.
Halkii mugdiga ahayd uu taagnaa markii ay kasoo dhaqaaqeen bay wajigiisa qumaati u aragtay. Indhaheeda waa malaysan weysay. In ay riyooneyso iyo in ay soo jeedo bay kala garan weysay.
Si fiican bay u fiirisay. “wallaahi waa isagii” bay hoos iska tiri. Isagu laakiin maba uu garanayo qofka ay tahay. Malaha labiska baa qof kale u ekeeyay. Markii ay aragtay in uusan garanayn bay iyana afkeeda iska xiratay, oo gaarigii gadaal kala fuushay.
“Mahadsanid abaayo. Haddii aadan isoo qaadi lahayn caawa jidkaas buu waagu iigu beryi lahaa”.
“Wax dhibaatp ah malahan aboowe”.
Cali weli Muraayo ma uusan garan. Waligiis hal galab buu u arkay, si fiicanna uma sii fiirin, oo hadduu maalin kale arki lahaa xitaa ma aqoodeen. Caawa ooy aad usoo labisatay, habeen madowna ay tahay in uu garan waayo waa wax la filan karo. Muraayose waaba ku faraxsantahay in uu garan waayo, sababtoo ah waxay heysataa fursad ay si hor leh isugu bartaan, isagoon saskii uu maalinkii koowaad ka qaaday aanan qabin.
Cali Xafladaha muusiga ma aado, caawase Magool oo uu heesaheeda aad u jecelyahay daradeed buu usoo aaday. Wuu arkay dhalinyarada intooda badan in aysan fanaanadda magaceeda maahane, aysan heesaheeda aqoon. Wuxuu ka mid ahaa dadka fara ku tiriska ahaa, ee markii ay Magool heesaysay la qaadayay, oo markii ay heesaheeda kuwa ugu macaan qaadana, foori ku dalbanayay in loogu soo celiyo.
Inta Muraayo kusoo jeestay buu weydiiyay “ka waran caawa, maka soo heshay barnaamijka?”
“Haa si fiican laakiin markii ay Magool baxday baan anna banaanka iska soo aaday”
Cali oo malaysan la’ in Muraayo iyana ay Magool soo aaday, malaha markii horena is lahaa Muraayo waa gabar xafladaha dhan iska aada ciddii doontaba haka heestee, baa inta iskala wareejiyay oo si fiican ugu soo jeestay weydiiyay, “ma magool baad taageertaa?”
“Haa” bay ku jawaabtay iyadoo u heysata in uu foorjeeynayo, lana yaabanyahay gabar yar oo islaan qadiimi ah jecel, bilaawdayna in ay Magool amaanto, oo fanaaniintii kale caayso.
“Is deji bal abaayo” buu yiri isagoo dareemay sheekada meesha ay u dhigtay, sababtoo ah, isaga laftiisa bay dhalinyarada xaafadda ee fanaan oo dhan u taqaan Xabiib Sharaabi iyo Cabdow Aramram, ku camirtaan oo badow ku tilmaamaan. Cali waxaad moodaa in uu aad ugu farxay in uuba helay qof la jecel heesihii hore.
“Abaayo, aniga xataa Magool daraadeed baan u imid, oo waligeey bandhig faneed nuucaan oo kale ah ma tagin.”.
Muraayo ood moodid in lafteeda ay nafistay baa inta iyana kusoo jeesatay weydiisay “Haddii aad Magool taageertid, ii sheeg heesihii ay qaaday caawa, midda aad ugu jeceshahay?”.
Cali oo jacaylka uu u qabo Magool aanan kala door dooran karin heeseheeda, baa markuu cabaar indhaha taagay, Muraayana u malaynayso in uusan meesha waxba ku hayn, oo beentiisii laga daba tagay hal mar ku luuqeeyay:-
“Hurdo seexan maayee
hay halaynin adigaan
amba kuu hanweynee”,
Heestaan “Hurdo” waxay ka mid tahay heesaha Magool kuwooda dadku aysan aadka u aqoon, markii caawa la qaadayayna Magool maahane qof kale oo ju’ lahaa aanan la arag.
Muraayo oo dhabannahays kasoo haray, isla markaana aad ugu riyaaqaysa baa Cali oo heestii wada inta la qaaday, oo Magool gariirka codkeedu caanka ku yahay sifiican usii dhaadhaajisay, Magooshii lafteedii Magool uga sii ekaatay.
“Bisinka, waxaanba mooday in aad cajal daartaye, Magool oo meesha taagan baad tahay” buu Cali yiri isagoo markaan ka codsanaya in ay marba hees kale u qaado, iyana ay leedahay “waryaa! Hees kasta ood suuqa ka soo weysayba ma anigaad ii qaad i leedahay?.
Cali iyo Muraayo aad bay isugu baxday, sheekadoodana waxay isugu dhacaysaa sidii laba qofood oo waligood is yiqiinay. Darawalka, oo ah wiil ay Muraayo ilma abti yihiin, shaki baa ka galay in ay wiilka caawinaysay iyo in ay hore usii balameen.
Gaariga ay saaranyihiin waa nuuc magaalada looga yaqaan “Aaydhiin Aar”. Waa gaari yar, oo shan qaad ah, taayaro dhaadheer oo macmil ahse dhulka looga qaaday, si looga ilaaliyo godadka laamiyadu yeesheen inta dagaaladu ay socdeen. Gaariga gudihiisa waxaa meel kasta ka lusha kuul iyo daah lagu sharixi tagayo, Calise foolxumo ula muuqata.
Yarka wata gaariga oo ah nin dhalinyaro xaasle ah, baa waxaa u iibisay gabar walaashiis ah, oo kaamam lagu quudiyo dadka dagaalada iyo abaaruhu isugu darsameen ku leh dhowr meelood oo magaalada ah.
Darawalku hadba cajal buu daaraa, hadana badalaa markii Muraayo ay u sheegto in ay fanaankaas necebtahay. Markii danbena inta isaga sanifay buu raadiyihiisii iska dansaday, xabad sigaar ahna daartay. Muraayo waa u jeedaa in Cali uu dhibsanayo sigaarka gaarigia cariiriga ah lagu dhex cabayo, oo waa rabi lahayd in ay wax ka qabato, laakiin waxay ka xishoonaysaa in wiilka walaalkeed ah ooy soo barisay, hadana ay gaarigiisa ku dhex maamusho.
Cabaar bay heesaha fanaaniinta ay wada jecelyihiin ka sheekeysteen. Heesaha Magool bay isku xujeysteen lana ashqaraareen sida labadooduba ay u wada garanayaan.
Darawalku markuu Hoteel Shaamoow kasoo qaaday buu inta jidka Makka Al Mukarama soo qaadsiiyay, Lambar Afar dhanka Tarabuunka uga leexiyay. Jidkaan oo toos Al-Baraka, xaafadda Ree Warfaa Cumar, u taga baa xilligaan oo kale lasoo maraa, cabsi kuwa kale laga qabo darteed. Markii ay Jidka Sodonka soo gaareen bay damacday in ay Muraayo darawalka ku duwdo dhanka guriga Cali, hadana is qabatay si uusan u ogaan in ay gurigooda taqaano.
“Aboowe gurigaaga waa halkee?” bay weydiisay, isna wuu u sheegay, oo lagu dejiyay, iyadoo taleefanadii la kala qortay.
Cali wuu garanayaa Muraayo taleefanka gurigooda, oo dhowr jeer bay ka wacday, sidaas darteed bay u sheegtay in aysan hadeer taleefan gurigoodu lahayn, dhawaanse soo gashanayaan, una soo sheegi doonto, isaga lambarkiisa kaliyana ka qoratay.
Cali Cumar sidii nin xalay xilli danbe soo seexday camal saaka barqadii hurdo kuma gaarine, shantii buu kacay oo qoraxdaa ku cadaatay isagoo mowlaca guriga ku dhex yaalla sidii uu saaka ugu tukaday weli u dhex fadhiya..
Gabadhii xalay soo qaaday buuba ka shakisanyhay in ay run ahayd iyo in ay ahayd qof uu ku riyooday. Wuxuu la yaabanyahay sida ay u sahlanayd in ay sheekeystaan, iyo sida waqtigu uu u ordayay intii yarayd ooy gaariga wada saarnaayeen.
Welwelka ugu weyn ee heysta wuxuu yahay, in uusan Muraayo wax loogu daro aqoon, lambarna uusan ka reeban, oo haddii aysan isaga soo raadin uu wayn doono. Wuxuu Alle ka baryayaa in ay soo wacdo, oo taleefankii soo dhacaba isagaa isku qoray in uu qabanayo.
Muraayose saakay waxay ku jarmaaday shirkadii taleefanada ooy rabto in ay lambarka ka badalaan. Ma doonayso in Cali uu aqoodo, waxayna ku tashatay in ay xitaa Shamso ka qariso ooy howsheedaan hoosta ka dhamaysato.
Waa sideedii subaxnimo, waa maalinkii lala ballamay ree Sandhool. Dhowr oday baa hortaagan guriga Ree Xiirane. Saaka halkaan bay isku aruursanayaan. Cabdi Xiirane iyo sodogiis Absame oo laamiga oday habaabay ka doonay kaliya baa ka maqan.
Odayaasha Xiirane uu soo aruursaday waxaa ka mid ah Qoorsheel oo lagu yaqaano war helidda iyo aqoonta duruqdan ee uu u leeyahay arimaha Beesha. Cabdi Xiirane wuxuu aaminsanyahay haddii ay Qoorsheel iyo Gacameey oo Sandhool loo diray is helaan in wuxuu doono uu daqiiqad heli karo.
Labadaan oday, heshiiska Beesha in la taaba galiyo waa ka go’antahay, oo labadoodu arintaan lafteeda bay u xidideen.
Cabdi Xiirane iyo Absame iyagoo Suuratul Kahfi ay u daarantahay bay gaarigii odayaashii soo hordhigeen kuna gureen gedigood iyagoo is wada buuranaya. Hadduu doono haku yaraadee, yaa kala jecel, ma awalbaa sharci xadidaya inta qof ee gaari raaci kartaa Soomaaliya ka jiray?
Ree Sandhool, iyagu Saaka salaaddii Subax kadib hurdo kuma laaban, oo odayaasha usoo socda bay quraac u diyaarinayeen. Qol weyn oo hoose, oo fadhi loogu talo galay baa inta kuraastii laga qaaday odayaashii loo goglay. Raashinkii oo kulul oo wada daboolanna lasii dhigay. Odayaashii Ree Sandhool ay soo diyaarsadeen uu Gacameey hor kacayana guriga banaankiisa hore bay Ree Xiirane ku sugayaan si ay usoo dhaweeyaan, oo qosolkooda, kaftankooda iyo farxadooda baa baxaysa, taas oo Jaamac Sandhool welwel weyn ku haysa maadaama gabadhiisa in la dhiibi doono ay u egtahay..
Cabdi Xiirane gaarigii markii uu guriga Jaamac Sandhool soo hortaagay baa intaysan odayaashii kale dhaqaaqin, Muumin Sandhool inta booday, isagoo “soo dhawaada” leh, daaqadihii ka furay, oo intii aadka u cuslayd inta gacmaha qabtay in ay soo degaan ka caawiyay.
Quraacdii markii la cunay, salaan iyo dhowr maahmaahyood oo lalaba ah, naagahana si guud loogu durayo kadib, waxaa hadalkii qaatay Muumin Sandhool oo arintii laga soo doontay sheegay in ay ogolyihiin.
“Intaanan arinkaas loo galin waxaan jeclahay marka hore in aan soo dhaweeyo Cabdi Xiirane iyo Absame, idinkana raali galiyo is fahanwaagii idinka iyo Jaamac Sandhool idin dhex maray” buu Gacameey hadal ku bilaabay, gudana galay in uu ka sheekeeyo taariikhdii Beesha iyo xaaladihii kala duwanaa ooy soo martay.
Qoorsheel oo daacdaacsanaya, farahiisana ku fandhacilanaya, baa hadalkii qaatay oo hadalladii Gacameey bogaadiyay, kuna adkeeyay Beesha in aysan sahlan heshiiskii dhibka weyn laga soo maray, ugana mahad celiyay Ree Sandhool sida sharafta leh ooy usoo dhaweeyeen, isla markaana diyaar ugu yihiin howshii loogu yimid in ay dhameeyaan.
Sida dhaqanka ah Cabdi Xiirane baa inta istaagay isagoo maslaxaya cimaamad madaxa ka saaray Jaamac Sandhool, Jaamacna waa ka yeelay iyagoo is gacan gelinaya dhabarkana iska dharbaaxaya.
Mar labaad Qoorsheel baa hadlay, gabadhiina si rasmi ah u weydiistay Jaamac iyo Muumin Sandhool.
Muumin baa hadloo yiri gabadha waan idin siinnay, Jaamac dhankiisana soo eegay si Jaamac isna gabadha uu u baxsho, Jaamacna isagoo caga jiidaya wajigiisana laga dareemayo in uu ka xunyahay buu gabadhii “waan idin siiyay” yiri.
Cabdi Xiirane oo sheekada dhanba ka shakisan, horayna u arkay gabdho waa la baxshay inta la yiri hadana iyagii baa guurgkii diiday lasoo sheegay, isla markiina inta hadal qaatay uga mahadceliyay Ree Sandhool gabadha ay siiyeen, una sheegay in beri la mehrin doono. Isagoo baqshad infiitooyin ay ku jiraan, ee uu Ree Sandhool ugu talo galay, saliga caaga ah ee lagu quraacday saaraya, buu u sheegay in odayaashaan oo dhanna ay ka casuuman yihiin hoteel Saxafi, uu usbuucii hore sii carbuunay markii kulanka maanta ah la isku afgartay.
Cabdi Xiirane aad buu u diyaarsanyahay, qiyaamada uu Muumin maleegayayna wuu dareensanaa, waayo farxadda iyo bashbashta Muumin ka muuqatay markuu soo wacay aad bay uga duwanayd hadal kulaylkii, macangagnimadii iyo meel ku dhagii Muumin waligiis lagu yiqiinay.
Odayaashii cabaar bay qaxweeyeen, meeshiina isku sii kala balbalaariyeen iyagoo qaarkood ay barkimo dalbadeen, rabaanna in ay Salaadda Jumcaha, oo saacad iyo bar ay ka dhimantahay halkaan ku sugtaan. Jaamac Sandhool ciilka iyo xanaaqa hayya waxaad moodaa in dhagahiisu qiici rabaan, toban jeer buuna damcay in uu wada ceyriyo, gabadhiisana ceshto.
Wax yar mar ay meeshii sidii neef darraad baqtiyay dibiro weynaayeen buu Cabdi Xiirane weydiiyay in uu sii qaadayo, odayaashii maadaama uu isagu baxayo masjid fogna uu ballan ku leeyahay. Odayaashii inta xaabxaabsadeen bay gaarigii isku gureen.
Markii Jaamac Sandhool uu qeylo kala kor dhacay Muumin,
gaarigii Xiirane weli guriga Ree Sandhool kama hor dhaqaaqin. Ciil uu u qabo qorshe xumada Muumin buu sugi weysanaa inta ay ka baxayaan.
“Akhliloowoow, qorshahaagii waa shaqeeyay soo maaha? Maxaad yeeleysaa beri Hoteel baa nalku balanshaye? Oo gabadha aad leedahay waa diideysaa yaa warkeedaba ku jira, berri wiilkii sidii in uu gabadhayda dhaxalka ku helay gafuurka taagayay baa lasoo wadayaahe, kadibna innagu inta bixino lagu xiriye, intaas oo qofood oo ree tolka ah dhexdoodana kuma diidi karnoo, inagaa hadeer inta raashin ku gurnay gabadheeniina dhiibnaye?”.
Muumin waxaad moodaa in qorshihiisii uu shaqayn waayay. Hadal waa kasoo bixi weysanyahay. Dariiqa kaliya ee u furanna waa in uu Jaamac ka dhaadhacshaa in uu gabadha baxshaa, haddii kale Beesha waa lagu ceeboobayaa, lagana yaabaa in laga toloobo.
Muumin hadal meel uu ka bilaabo buu garan weysan yahay. Dagaalkii Jaamac iyo Xiirane dhex maray baa dhaliyay dhibka markii horeba, laakiin midaan Jaamac kuma qabsan karo, oo wuxuu u ekaanayaa qof marmarsiyo cusub la yimid isagoo markii hore kalsooni weyn muujiyay.
“Jaamac i dhagayso, waan ogahay qorshaheennu ma uusan noqon sidii aan rabnay, laakiin runtu waxay tahay in ay qasab tahay in aad gabadhaas bixisaa, ducana ugu dartaa, sida ay sheegeenna aad ku dadaashaa in aysan waxbarashadooda ka harin. Hadeerna waqti kuuma harinne, meherka qaraabada ku casuun”.
Muumin markuu intaas is daba dhigay, buu inta cimaamadiisii oo kursi meesha yiilay saarnayd ka dafay, oo garabka si qaloocan u saartay albaabka ka degay.
Jaamac waxa maanta dhacay waa malaysan weysan yahay. Ciilka haya in uu sidii caruurtii ooyin la baroorto baa kasoo dhaw. Isagoo madaxiisa raaricinaya, ceeb daraadeedna in uu xaaskiisa wajigeeda eego diidan, buu sheekadii dhamayd si boobsiis ah ugu dulmaray, iyadoo amakaaga haya afkeedii oo kala balaqmay isku keeni weysan.
Hooyo Cibaado Dhuunkaal inta jaranjarada hoos istaagtay bay Muno u dhawaaqday iyadoo markaan quus, wixii ay doonto iska leh “Munooy berri baa lagu mehrine, wixii asxaabtaada ah eed rabtid in ay ka qeyb galaan meherka magacyadooda nasii aan infiitada ku qornee”.
Muno oo u heysata in hooyadeed la kaftamayso baa jaranjaradii kasoo dagaysa, iyadoo hadba caleen geedaha kasoo biday sii darbeyneysa.
LA SOCO QEYBTA 18AAD
Xil. C/raxmaan Odawaa oo ka Jawaabay hadalkii C/wali Gaas
Madaxwayne Farmaajo oo xilka qaadis ku sameeyay xeer ilaaliyihii Guud ee qaranka
Haasaawihii oo qaab siyaasadeed laga dhigay